[OGAAD] Fayraska maareynaya baabi'inta unugyada kansarka
Inicio/Ciencia/Saynisyahano uu hogaaminayo Dr. Yuman Fong, ayaa helay virus dila dhamaan noocyada kansarka ee la yaqaan
0 1.626 1 daqiiqo akhri
Waxa loogu yeedhi karo horumar togan, koox saynisyahanno ah ayaa laga yaabaa inay ku soo dhowaadeen helitaanka dawada kansarka iyagoo soo saaray daroogo fayras leh oo awood u leh inay dilaan unugyada kansarka u adkaysta uguna yaraadaan burooyinka. Haddii tani shaqeyso, waxay noqon kartaa horumar cilmiyaysan oo dhakhaatiirta iyo bukaannadu ay muddo ku taamayeen.
Koox cilmi baarayaal ah oo uu hogaaminayo Dr. Fong, oo ah dhakhtar qalliinka kansarka ku dhaca beerka, ayaa soo jeediyay qaabeynta virus cusub oo ku saleysan cowpox, kaasoo muujiyey awooda disho unugyada kansarka.
Shirkadda Austaralia biotech ee Imugene, waxay abuurtay nooc ka mid ah culeyska fayraska (furuqa) oo muujinaya faa iidada suurtagalka ah ee gebi ahaanba daaweynta kansarka. Daaweynta, oo loogu magac daray 'CF33', waxay ballanqaadaysaa inay disho wax walba nooca unugyada kansarka saxanka Petri sidoo kale waxaa lagu andacooday inuu dilo ama gabi ahaanba yareeyo burooyinka jiirka. Daraasado iyo tijaabooyin ayaa dhowaan la qaaday si loo xaqiijiyo horumarka.
Daraasadaha ugu horreeya ee ku saabsan waxtarka qorshaha daaweynta waxaa ka mid ah bukaannada laga helo cudurka kansarka naasaha oo saddex-laab ah, kansarka sanbabada, kaadi haysta, mindhicirka iyo kansarka caloosha. Bukaannada Melanoma sidoo kale waa la ogaan karaa. Sidan oo kale, cilmi baarayaashu waxay aqoonsan karaan halka ay daaweynta ugu waxtar badan tahay.
Sidee ayuu u shaqeeyaa culeyska dila unugyada kansarka?
Daaweyn ahaan, bukaanada waa in lagu duraa culeyska si toos ah burooyinka si loo arko habka ficilka.
Professor Fong wuxuu sheegay in cowpox, oo loogu magac daray virus aan dhib lahayn, tijaabooyin la sameeyay lagu ogaaday in noocan cusub ee wanaajiyay fayrasku uu caawin karo disho unugyada kansarka xididka.
Tiknoolajiyada AI waxay baraysaa carruurta dhagoolayaasha ah inay wax akhriyaan
Bacillusku waa inuu markaa digtoonaado habka difaaca jirka inay kujiraan unugyo kansar kujira jirka; Tani waxay sababi doontaa in unugyada difaaca ay helaan oo dilaan unugyada halista ah.
Waagii hore, inkasta oo khabiiradu aysan ka shaqeyn inay helaan daawo gaar ah sidan oo kale, dhowr mashruuc ayaa loogu talagalay waxtarka daaweynta iyo daaweynta xulashada ee daaweynta kansarka.
unugyada kansarka CF33 Dr. Yuman Fong Noocyada kansarka noocyada unugyada kansarka fayrasku wuxuu dilaa kansarka virus dila unugyada kansarka